Izindaba - Ukufekethiswa igama elijwayelekile kunoma iyiphi iphethini yokuhlobisa efekethisiwe ngendwangu enezinaliti nentambo.
Ukufekethiswa igama elijwayelekile kunoma iyiphi iphethini yokuhlobisa efekethisiwe ngendwangu enezinaliti nentambo. Kunezinhlobo ezimbili zokufekethiswa: okufekethisiwe kukasilika nokuhlobisa izimpaphe. Lapho kusilika noma eminye imicu noma imicu kuhlatshwa inaliti ngomklamo othile nombala entweni efekethisiwe nemibala igwazwa yinaliti ukwakha iphethini yokuhlobisa. Kungumsebenzi wokwengeza ukwakheka nokukhiqizwa komuntu kunoma iyiphi indwangu ekhona usebenzisa izinaliti nentambo. Imifekethiso, enomlando okungenani weminyaka eyizinkulungwane ezimbili noma ezintathu eChina, ingenye yemisebenzi yezandla yendabuko yamaShayina.
Okufekethisiwe kwethu kusebenzisa izitshalo, izimbali nephethini yekhathuni efekethisiwe ngophahla olunthathu, ilenge, ama-pillowcases, isibuko, isikhwama semali, izigqoko zekhanda, imigexo, izindandatho, amacici, izifonyo, izifihla busiki, amaduku, njll. into yoqobo uqweqwe lukhekhe, hhayi kuphela ekhombisa ileveli yokufekethisa, futhi yenza izinto ezingezona ezejwayelekile zengeze ukuthukuthela okuningi. Imininingwane eyenziwe ngomugqa wokusebenza okufekethisiwe ocwebezelayo, egqamisa intelezi ehlukile.
Imifekethiso inengokomoya, ukunambitheka kwempilo, umbala ocacile nohambisanayo, ukuntuleka kwesikhala semicabango esingapheli. Imifekethiso iliculo lothando, inkulumo emnene yenaliti nentambo, indwangu engenalutho inikezwe ugqozi, umcabango ocebile futhi omuhle uhlobisa impilo eyindida, futhi wakhe indawo yokuphupha nesikhathi senkondlo. Iphakethe lezinto ezibonakalayo lifaka indwangu efekethisiwe ephrintiwe, intambo efekethisiwe, inaliti efekethisiwe, imiyalo yokudweba enemininingwane. Imikhiqizo ayiqediwe, idinga ukwenziwa ngesandla, ilungele abaqalayo ukuqala, Abangane abadlala ngezinaliti nentambo okokuqala ngqa, ungakhathazeki, imikhiqizo efekethisiwe ifakwe okokufundisa okuningiliziwe kwevidiyo ephezulu, landela ividiyo ingaqedwa, ake wena futhi efekethisiwe zero ibanga oxhumana naye. "Umhlaba awukho ukuntuleka kobuhle, ukungabi namehlo nje okuthola ubuhle", izinto eziningi ezijwayelekile, zihlala zinganakwa yinhliziyo ematasa.
Mhlawumbe impilo ayilungile yonke, kepha inqobo nje uma kunothando lwempilo, kujabule ukudala inhliziyo enhle, bese kuthi kancane, impilo ibe yilokho okufunayo. Inqobo nje uma inhliziyo, izinto ezijwayelekile nazo zingaba ezingavamile, inqobo nje uma zizimisele enhliziyweni, impilo ejwayelekile izonikezwa incazelo yayo ehlukile!